Abakhiqizi Nabahlinzeki Bomshini Wokufaka Ilebula Yelebula - Imboni Yomshini Wokufaka Ilebula yase-China
I-FK816 Automatic Double Head Corner Sealing Label umshini wokulebula
① I-FK816 ifanele zonke izinhlobo zokucaciswa kanye nebhokisi lokuthungwa njengebhokisi lefoni, ibhokisi lezimonyo, ibhokisi lokudla futhi lingalebula imikhiqizo yendiza.
② I-FK816 ingafinyelela ifilimu yokuvala ekhoneni eliphindwe kabili noma ilebula ilebula, esetshenziswa kabanzi ezimbonini zezimonyo, zikagesi, zokudla nezokupakisha
③ I-FK816 inemisebenzi eyengeziwe ezokwandisa:
1. Iphrinta yekhodi yokumisa noma iphrinta ye-ink-jet, lapho ilebula, phrinta inombolo yeqoqo ecacile yokukhiqiza, usuku lokukhiqiza, usuku olusebenzayo nolunye ulwazi, ukubhala ngekhodi nokulebula kuzokwenziwa kanyekanye.
2. Umsebenzi wokudla okuzenzakalelayo (kuhlanganiswe nokucatshangelwa komkhiqizo);
I-FK815 I-Automatic Side Corner Sealing Label Machine
① I-FK815 ifanele zonke izinhlobo zokucaciswa kanye nebhokisi lokuthungwa njengebhokisi lokupakisha, ibhokisi lezimonyo, ibhokisi locingo nalo lingalebula imikhiqizo yendiza, libheke imininingwane ye-FK811.
② I-FK815 ingafinyelela ukulebula okugcwele kwelebula yokuvala ekhoneni eliphindwe kabili, esetshenziswa kabanzi ezimbonini ze-elekthronikhi, izimonyo, zokudla nezokupakisha.